Fanaraha-maso ny Coral Disease | Reef Resilience
Fanaraha-maso ny areti-maso
Fanaraha-maso ny fandraisana anjara
Fanaraha-maso ny Herbivores
Fandaharan'asa fanaraha-maso ny fandaharan'asa sosialy ekonomika
Fanaraha-maso ny areti-nify mainty. Sary © Bette Willis, Foibe manam-pahaizana momba ny harena an-kibon'ny tany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral diseases dia nitombo ny hafanam-pandrefesana, ny hafanam-po ary ny haavon-tany nandritra ireo am-polony taona farany, ary mampihena ny faharetan'ny vatohara. Ny fanaraha-maso haingana sy ny fanaraha-maso marary momba ny haran-dranomasina dia ampiasaina mba handinihana ny fiantraikan'ny aretina voajanahary.
Ny fanombanana sy ny fanaraha-maso ny fitsaboana amin'ny marary dia tokony hitady valiny manokana momba ilay faritra, anisan'izany ireto manaraka ireto:
Moa ve ny aretina amin'ny vatohara? Raha izany, iza moa?
Miparitaka ny aretina, ary raha eny, haingana ve?
Inona no karazana voakasika? Misy fiantraikany eo amin'ny kilasy na ny morphologie amin'ny vatohara ve ny aretina?
Manao ahoana ny voka-dratsin'ny aretina? Maty ve ny vatohara?
Misy vatohara, faritra hipetrahana na fari-dranomasina izay misy fiantraikany kokoa noho ny hafa?
Moa ve voamarikao vao haingana ny fiovana eo amin'ny tontolo iainana izay mety hampirisika ny haran-dranomasina hiparitaka?
Ny aretina sasany dia miteraka fitomboan'ny fitomboana fa tsy ny fiainana an-tany (oh: Porites trematodiasis), fa ny hafa kosa mety hiteraka fahafatesam-piainana manan-danja (ohatra, aretina azo tsapain-tànana toy ny sendikan'ny fotsy hoditra). Ny mpikarakara dia tokony ho liana amin'ny aretina izay miteraka fahabangana ambony.
Ny fomba fanodinana natokana ho fanadihadiana ny aretin'ny vatohara dia vao haingana.ref Ny dingana voalohany hanombanana ny marary amin'ny haran-dranomasina dia ahitana ny fanadihadiana ny habetsaky ny habakabaka amin'ny fipoahan'ny aretina, ary ny fanadihadiana raha mety ho vokatry ny toe-draharaha vao haingana ny tontolo iainana vao haingana, toy ny fiovana tsy mitongilana amin'ny hafanana rano, ny fandotoana rano, na ny loto simika. ref Raha miorina amin'ireo vokatra ireo dia azo atao ny manangana drafitrasa iray mba hamaritana hoe inona no tokony halamina ary inona no fomba fampiasana. Ny fanapahan-kevitra dia handinika ny karazana sy ny henjan'ny hetsika, ny toerana misy ny hetsika sy ny loharano azo ampiasaina.
Raha misy ny loharanon-tsolika, dia afaka mampihatra ny fanombanana ny aretina amin'ny antsipiriany. Ny fanombanana toy izany dia mety ahitana ny famaritana ireo karazan-tsakafo azo tsapain-tanana, fihenan-tsakafo (ampahany amin'ireo voapoizina), ary ny famaritana azy fery amin'ny vatan'ny voa afatra. ref Azo dinihana ihany koa ny fandalinana mikrobiolojika, molekiola sy histolojika momba ny aretina, ka mitaky ny fanangonana karazam-boalaza sy tontolo iainana. Ny ezaka fanaraha-maso ny aretina dia mahasoa matetika amin'ny fanaovana sary an-tsary mba ahafahana miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny aretina.
Tsy misy fomba iray tena marina hamantarana ny aretin'ny vatohara. Misy fomba amam-panao ahafahana manamboatra ny saha ary ny mpitantana dia mila mamaritra ny fomba tsara indrindra ho an'ny tranokala. Mba hahazoana fanazavana amin'ny fomba mahazatra ampiasaina hanombanana ny marary amin'ny haran-dranomasina, jereo ny boky momba ny aretina mikraoba ary Hawaii's Rapid Response Plan ao amin'ny Resource, etsy ambany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahamarinana mahazatra tena izy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Health Identification Tools
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-làlana momba ny aretina Coral Western Atlanticmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHawaii's Plan of Response Rapid Response for Events of Coral Bleaching, Disease or Crown of Thorns Starfish Outbreaksmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsarimihetsika ho fanombanana ny fahasalaman'ny fahasalamana amin'ny vatohara Karaibamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsarimihetsika ho fanombanana ny fahasalamana ara-pahasalamana amin'ny vatohara Indô-Pasifikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAostralia Institute of Marine Science Coral Disease
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-làlana momba ny famotopotorana ny fahasitranana amin'ny areti-maso
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Famantarana ny aretina